३० वर्षमा पनि किन आएन मेलम्ची ? | NiD - News
३० वर्षमा पनि किन आएन मेलम्ची ?
श्रीधर खनाल, २६ श्रावण २०७४
अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ सालमा ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु' भन्दै गरेको भाषणलाई धेरैले हाँसेर उडाए । ‘ह्युमर सेन्स' भएका भट्टर्राइको भाषण ‘ह्युमर' सुनिए पनि त्यसभित्र राजधानीवासीको पीडा लुकेको थियो । भट्टराईले आश्वासन दिएको साढे दुई दशक नाघिसक्दा पनि काकाकुल राजधानीवासीको पीडामा ‘मेलम्ची मलम' लाग्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा ‘पानी समस्या' पुरानै हो । अहिले पनि यहाँ राणाकालको वितरण प्रणालीबाट पानी वितरण हुँदै आएको छ । ४० प्रतिशत हाराहारीमा चुहावट भएपछि पञ्चायतको अन्तिमतिर पानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आयो । समाधानका विकल्प त्यही समयबाट खोजिन थालेको हो ।
आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म मुआब्जा विवादसमेत मिलेको थिएन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । आयोजनाका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले भने, ‘आयोजनाको सामान्य पूर्वाधार पनि थिएन । सबै काम आयोजनापछि थाल्दा बढी समय लागेको हो ।' भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले पनि आयोजना ढिलाइ भएको हो । ‘कतिचोटि त मैले फाइलमा चक्का राखेर पठाऊँ कि समेत भनेँ तर फाइल नै अघि बढेन', उनले थपे ।
२८ सेप्टेम्बर २००१ म छनोट भएको हेनिल कोनेकोले ३१ मार्च २००३ मा प्रवेशमार्ग बनाइसक्ने सर्तअनुसार ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का लिएको पाँच सय २० दिनमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि ८ अक्टोबर २००२ मा मात्र उसलाई ‘एड्भान्स पेमेन्ट' दिइएको थियो । सडक निर्माणमा परामर्शदाताको काम गर्दै आएको नरप्लान्ट एयसले समयमा चासो नदिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो ।
‘आयोजनाको मुख्य कार्य हेडवर्कसको काम अहिलेसम्म थालिएको छैन', आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरेराम कोइरालाले हेडवर्कसको कामका लागि कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने बताउँदै भने, ‘इन्टेक स्टक्चर नबन्दासम्म मेलम्चीको सबै पानी काठमाडौं आउँदैन ।'
संसद्को लेखा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी सरकारले चाहने हो भने चैतसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री नै आयोजनाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर लागेका छन् । यो हिसाबले काम अगाडि बढ्ने हो भने मेलम्ची कहिले आउँछ यसै भन्न सकिँदैन ।'